मुम्बईको सपनाकासमा बल्दैछिन् विशाखा « AayoMail
मुम्बईको सपनाकासमा बल्दैछिन् विशाखा
कक्षा ७ पढ्दा स्कुलमा एउटा कार्यक्रमका लागि ‘नाटक’ देखाउने तयारी भइरहेको थियो। त्यसमा उनी पनि छानिइन्।
नाटकमा उनी ‘केटा’ बनिन्। अलि लजालु स्वभाव। मञ्चमा उनले ‘केटा’ को स्वभाव उतारिदिइन्। आज आएर त्यसको सुत्र सिकेकी छिन् उनले ‘आफूलाई बिर्सेर अरूको क्यारेक्टरमा घुस्नुपर्छ, अनिमात्रै हरेक अभिनय वास्तविक लाग्छन्।’
विशाखा थापा- भारतीय ‘वेब सिरिज’ को दुनियाँमा अहिले ‘रेटिङ’ भइरहेको ‘ब्रोकन बट ब्युटिफुल’ को एउटा शीर्ष भूमिकामा देखिने अनिनेत्री हुन्।
अहिले यो सिरिजको तेस्रो सिजन सुरु भएको छ।
बलिउड इतिहासमा यो त्यस्तो सिरिज भएको छ जसले समीक्षकहरूबाट नौ स्टारसम्म रेटिङ पाएको छ।
श्रीराम कलेजले मोडेको बाटो
काठमाडौंमा जन्मिएकी उनले यहीँको मोडर्न इन्डियन स्कुल सकेर उच्च शिक्षा पनि भारतीय दूतावासकै केन्द्रीय स्कुलबाट सकिन्। त्यसपछि उनी नयाँदिल्ली गइन्।
सानैदेखि भारतीय विद्यालयमा पढेका कारण पनि होला, भारत उनका लागि ‘आदत’ भइसकेको थियो। दिल्लीको श्रीराम कलेज अफ कमर्स विशाखाको जिन्दगीको ‘टर्निङ’ प्वाइन्ट बनिदियो।
कलेजमै कहिलेकाहीँ हुने कार्यक्रमका लागि बनाइएको एउटा नाटक क्लबमा पनि उनी सामेल थिइन्। स्कुले बानी नै थियो, जुनसुकै कार्यक्रममा पनि होमिइहाल्ने। मौकाहरू उनले छाडिनन्।
कलेजमा एक दिन ‘कास्टिङ डाइरेक्टर’ हरूको टिम आयो। एउटा सिनेमाका लागि उनीहरू त्यहाँ ‘स्क्रिनिङ’ गर्न आएका थिए।
त्यहाँ विशाखा पनि देखिइन्। प्रयासको एउटा खुट्किलो थियो त्यो। कतिपय प्रयासहरू यस्ता हुन्छन्, जसले जीवनमा सफलताका ढोकाहरू आफैं घचघच्याइदिन्छन्।
केही दिनपछि विशाखालाई एउटा फोन आयो। त्यो त्यही प्रोडक्सन हाउसको थियो, जो विशाखाहरूलाई खोज्दै श्रीराम कलेज आएका थिए।
खुसीका सीमा थिएनन्, उत्साहले हुत्याउँदै उनलाई प्रोडक्सन हाउससम्म पुर्‍यायो। जुन सिनेमाका लागि त्यो हाउसले विशाखाहरूलाई खोजेको थियो त्यसका लागि उनी छानिइनन्।
एउटा लामो यात्राका लागि पाइला बढाइसकेकी विशाखालाई त्यो पहिलो ‘असफलता’ ले निराश भने बनाउन सकेन। किनकि, ढोकाहरू थुप्रै थिए।
त्यही हाउसले विशाखालाई थुप्रै विज्ञापनहरूमा देखिने मौका दियो। उनले ‘आइडिया’ जस्ता मोबाइल कम्पनीका लागि विज्ञापनहरूमा देखिने मौका पाइन्।
विज्ञापनमै सही, विशाखाका लागि त्यो एउटा प्रवेश विन्दु थियो। हजारौं माइलमा तय गर्नुपर्ने गन्तव्यको यात्रा आखिर सुरु हुने त सुरुवाती पाइलाहरू नै हुन्।
उनले त्यस्ता थुप्रै विज्ञापनहरूमा देखिने मौका पाइन्। पलहरू बितिरहेका थिए। पढाइ चलिरहेको थियो। ‘बलिउड’ सपनाहरूले घेरिरहेका थिए।
विशाखाका एकजना साथी सहायक निर्देशक थिए। उनले एक दिन विशाखालाई भने- ‘एउटा सिनेमा छ। त्यहाँ एकजना जुनियर आर्टिस्ट चाहिएको छ। काम गर्ने हो?’
अहो! विशाखा मनलाई के चाहियो र! उनका लागि जुनियर वा सिनियरको मतलब थिएन। बस्, सिनेमा सेटसम्मै पुग्नेमात्रै चाहना उत्कट भइसकेको थियो।
‘तमासा’ सिनेमाको सुटिङ तयारी भइरहेको थियो। यो सन् २०१४-१५ तिरको कुरा थियो। रणवीर कपुर र दीपिका पादूकोणको त्यो सिनेमा।
विशाखा फेरि ‘तमासा’ को सेटमा पुगिन्।
इम्तियाज अलीले निर्देशन गरेको त्यो सिनेमामा त्यस दिन रणवीर कपुरको सुटिङ थियो। रणवीर कपुरको त्यो अभिनय देखिन्। मुटु ढक्क भयो। ह्यान्डसम रणवीरलाई देखेर होइन, अभिनयको त्यो कलाका लागि कतिसम्म आफूलाई डुबाउनुपर्दो रहेछ भनेर विशाखाले चीत खाइन्।
‘अभिनय’ के हो? अरूसँग यसका दसथरी परिभाषा होलान् तर विशाखाका लागि अभिनय एउटा ‘शिल्प’ हो। जो हृदयभित्रैबाट अंकुराउनुपर्छ।
त्यो आफैं उम्रिनुपर्छ अनि कडा मेहेनत र परिश्रमले त्यो निखारिनुपर्छ। पहिलोपल्ट एउटा ठूलो सिनेमाको सेटमा पुगेकी विशाखालाई लाग्यो अब यसमा आफूलाई डुबाउनैपर्छ।
समुद्रमा नडुबी उत्रिनुको मजा नै कहाँ र!
उनका लागि कलेजका ‘नाटक समूह’ हरू साँघुरा लाग्न थाले। ज्ञानका सीमा हमेसा साँघुरा नै हुन्छन्।
विशाखा दिल्लीका नाम चलेका ‘थिएटर’ हरू जान थालिन्। त्यहाँ सिक्न थालिन्।
‘यो एउटा गणितजस्तै लाग्यो। हेर्दा सामान्य लाग्ने ‘प्लस’ र ‘माइनस’ हरूबाटै गणित जेलिएको हुन्छ र समाधान पनि त्यहीँ नै हुन्छ’ कलाकारिताको त्यो शिल्पी सुत्र पनि विशाखाका लागि सजिलो तर जेलिएर आफैंमा एउटा अप्ठ्यारो गणित थियो।
तर, जेलिएर त्यहीँभित्र लुकेका सफलताका सुत्रहरूलाई विशाखाले पछ्याइरहिन्।
‘यसलाई अलिअलि नाटक खेल्न आउँछ, लौ अब फिलिमै खेलाइदिम् न त! भनेर कम आँक्ने क्षेत्रै होइन यो,’ विशाखालाई त्यसपछि थाहा भयो, ‘सिक्दै जाँदा सिक्दै जाँदा यो त कहिलै सिकेर नसकिने सिकाइको एउटा सु?ङ रहेछ जसको अन्त्य नै हुँदैन।’
जीवनै त्यही हो। जब जीवनमा ‘सिक्ने’ केही हुँदैन। सिकेर सकिन्छ अनि जीवन पनि लगभग जिएर सकिन्छ।
दिल्ली टु मुम्बई
सपनाकासको एउटा भयंकर उडान हो मुम्बई। सक्नेहरू उड्न पनि सक्छन् अनि नसक्नेहरू त्यहीँ हराउँछन् भीडमै।
विशाखा नामै काफी थियो, सपनाको त्यो आकासमा चम्किरहने एउटा नक्षत्र।
विशाखालाई थाहा थियो, सपनाको त्यो आकास चुम्न कम्ता चुनौती छैन। त्यसैले उनले सकेजति आफूलाई त्यो शिल्पमा घोलिसकेकी थिइन् दिल्लीमै।
कमर्स पढिरहेकी उनी ‘कलाकार’ को पंखमा उड्दै मुम्बई पुगिन्। उनलाई थाहा छैन ‘कमर्स’ अनि ‘कला’ को बाटो कसरी जोडियो वा छुट्टियो।
तर, विशाखालाई ती पंखहरूले उडाउँदै उडाउँदै ‘कला’ को त्यो भाग्यरेखामा पुर्‍याइदियो।
बाँच्न खोजिरहेकाहरूको एउटा अत्यासलाग्दो भीड हो मुम्बई। जीवन खोजिरहेकाहरूको समुद्र पनि त्यहीँ छ। दौड, धुप। एकले अर्कोलाई उछिन्न खोजिरहेका अनवरत पाइलाहरूको डोब हो मुम्बई।
सिक्ने र सिकाउनेहरूको अथाह सागर पनि हो मुम्बई। विशाखाको त्यो भाग्यरेखामा एकजना रसियन ‘गुरु’ भेटिए। उनले त्यहाँ पनि धेरै कुरा सिकिन्।
सुरुमै उनले आमिर खान प्रोडक्सनको ‘लाल सिंह चड्डा’ मा एउटा ‘अपिरियन्स’ भूमिका पाइन्।
आगामी डिसेम्बर २१ मा रिलिज हुने तयारीमा रहेको यो सिनेमा ‘कमेडी-ड्रामा’ विधामा आधारित छ। मुम्बईको सपना सागरमा खुलेको यो एउटा भव्य ‘स्वागत द्वार’ थियो विशाखाका लागि।
त्यहाँ पनि उनले सयौं ‘अडिसन’ हरू दिइन्। थुप्रै विज्ञापनहरूमा पनि देखिइन्। थुप्रै ‘फेसन शो’ हरूमा उनले ‘क्याटवाक’ गरिन्।
मुम्बईका ती रंगीन ‘ र्‍याम्प’ हरूमा टकटकिएका ती पाइलाहरू अनन्त गन्तव्यका मन्द चालहरू थिए।
‘ब्रोकन बट ब्युटिफुल’ : एउटा आशातीत ‘विशाखा’
टुटेका कुनै चीजहरू सुन्दर हुन्छन्। टुटेका कतिपय सपनाहरू पनि सुन्दर लाग्छन्। विशाखाले पनि काठमाडौं हुँदै दिल्लीबाट मुम्बई पुग्दासम्म धेरै ठक्कर खाइन्।
तर उनले सिकिन्- कुनै असफलताहरूले सफलताको संघारमै पुर्‌याइदिएका हुन्छन्। र, उनको करिअरमा ‘ब्रोकन बट ब्युटिफुल’ त्यही संघार बनिदियाे जहाँबाट उनी बलिउडकाे दुनियाँमा सानदार पदार्पण गरिन्।
बलिउड दुनियाँमा पछिल्लो दशक अंकुराएका तमाम ‘वेब सिरिज’ मध्ये ‘ब्रोकन बट ब्युटिफुल’ ले छुट्टै चर्चा कमाइरहेको छ।
२०१८ मा पहिलो सिजन रिलिज भएदेखि नै यो चर्चाको शिखरमा छ। टेलिभिजन दुनियाँका ‘स्टार’ एकता कपुरको एएलटी बालाजीले उत्पादन गरेको यो सिरिजका नायक हुन् सिद्धार्थ शुक्ला।
विशाखा पनि अहिले यही सिरिजमा छिन्, सिद्धार्थसँगै शीर्ष भूमिकामा।
भारतमा अहिले यो सिरिजको व्यापक चर्चा छ। तेस्रो सिजनमा दौडिरहेको यो एउटा त्यस्तो सिरिज हो जसले समीक्षकहरूको ‘नौ स्टार’ को रेटिङ पाएको छ। बलिउडमा यस्ता विरलै वेब सिरिज छन्।
किशोरावयको उन्मत्त प्रेम कथा बोकेको यो सिरिजमा विशाखा एक धनी बाउकी छोरी (गुल) को भूमिकामा छिन्। प्रेम, पैसा र इर्ष्याको जालोमा बुनिएको यसको कथा निकै रोमाञ्चक छ।
मुम्बईको ‘थिएटर’ दुनियाँमा भविष्य खोजिरहेको एउटा युवा ‘अगस्त्या राव’ (सिद्धार्थ शुक्ला) को जीवनमा ठोक्किन पुग्ने धनी बाउकी छोरी ‘गुल’ (विशाखा थापा) अरू थुप्रै पात्रका लागि ‘इर्ष्या’ बन्न पुग्छिन्, जसले अगस्त्यालाई प्रेम गरिरहेका हुन्छन्।
तर, नाटकमा भविष्य खोज्दै मुम्बईमा भौंतारिइरहेको अगस्त्यालाई गुलका धनी बाउले यसरी बसमा पारिसकेका हुन्छन् कि ‘शो’ नपाएर रक्सीको नसामा डुब्नै लागेको उसलाई गुलको प्रेमले उठाउँदै लैजान्छ। उसको जीवन अनि उसको थिएटर सपना पनि।
कहाँ चम्किएलिन् अब विशाखा?
‘त्यसको कुनै टुङ्गो छैन,’ विशाखालाई लाग्छ, ‘कलाको न कुनै भाषा हुन्छ न कुनै सिमाना।’ उनी मौका खोजिरहेकी छिन्।
इन्टरनेटले दुनियाँ यति साँघुरो बनाइसकेको छ कि केही पलमै सारा संसार आफ्नै अघि ल्याउन सकिने भएको छ। विशाखा त्यस्तै आकासको खोजीमा छिन् जहाँ उनको ‘सपना शिल्प’ साकार बनोस्।
‘मुम्बईले ट्यालेन्टमात्रै चिन्छ, विशाखाहरूलाई होइन,’ उनलाई राम्रोसँग थाहा छ, ‘दुनियाँले खोजेको पनि त्यही हो।’ जसका लागि विशाखाले अथाह मेहेनत गरेकी छिन्। आफूलाई कलाको त्यो रसमा यसरी घुलाएकी छिन् कि अब सायद त्यो बाटोबाट अलग हुन सम्भव छैन।
‘तर किन पछि फर्किनु र!,’ विशाखालाई लाग्छ, ‘भर्खर त पाइला सर्दैछन्। मुम्बईका सपना सागर विशाल छन्। उत्रिन त पहिला डुब्नैपर्छ।’
र, उनी याे कलाकाे दुनियामा भित्रैसम्म डुब्न चाहिन्छिन्।
हो, विशाखाका २२ वर्षे कलिला पंखहरू फटफटाइरहेका छन्, ‘कला दुनियाँ’ को अनन्त सगर चुम्न।
सबै तस्विरहरू : दिनेश गाेले/ आयाेमेल